Samsung Unpacked: Nke a bụ Galaxy S10 na ngwaọrụ ndị ọzọ | Akụkọ akụrụngwa
Samsung Unpacked: Nke a bụ Galaxy S10 na ngwaọrụ ndị ọzọ ewepụtara
"Bigbọchị ukwu" nke ụlọ ọrụ South Korea erutela, anyị abanyela Na-eduzi na ngosi nke Galaxy 10 ọhụrụ maka #Unpacked ẹkenịmde ke MadridAgbanyeghị, ekwentị dị elu nke Samsung abụghị naanị ihe ekwuputara, anyị nwere ezigbo ọgụ nke ngwaọrụ ọhụrụ dịka Samsung Galaxy Fold, ekwentị foldable ohuru, ihe ndozi ohuru maka Airpods na Galaxy Buds na n'ezie abụọ ọhụrụ nsụgharị nke Ihe nyocha ihe nlere nke Galaxy Watch na Galaxy Kwesịrị Ekwesị.
Nọnyere anyị iji chọpụta ngwaọrụ ndị a niile nke Samsung chọrọ iji merie ahịa ahụ kpamkpam, na mara ma ego ya na njirimara ikpeazụ ya.
1 Galaxy S10, Galaxy S10 + na Galaxy S10e, ọnụahịa na atụmatụ
2 Ihe ngosi banyere ezinụlọ Galaxy S10
3 Samsung Galaxy Buds, ndị agha ọhụrụ maka AirPods
4 Samsung Galaxy Ọrụ na Galaxy Fit na Galaxy Fit E
Galaxy S10, Galaxy S10 + na Galaxy S10e, ọnụahịa na atụmatụ
Kedu otu ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, ekwentị ndị ụlọ ọrụ South Korea na-ewere ọtụtụ ihe a ma ama. N'oge a, dị ka Apple mere, ụmụ okorobịa nọ na Samsung ahọrọla ịmalite nha atọ dị iche iche nke ọkọlọtọ ha, agbanyeghị, nha na atụmatụ nyere ha iwu. Ihe kacha Samsung Galaxy S10 + ya na sentimita 6,4 nke na-ekerịta njirimara yiri ya na Samsung Galaxy S10Ewezuga ikike batrị dị elu, ụdị seramiiki pụrụ iche nwere ruo 1 TB nke nchekwa na 12 GB nke Ram. Na mgbakwunye, akụkụ nke abụọ dị iche iche nke Galaxy S10 + ga-abụ a igwefoto abụọ.
Ihuenyo 6.4 sentimita asatọ. 3.040 × 1.440px mkpebi 6.1 sentimita asatọ. 3.040 × 1.440px mkpebi 5.8 sentimita asatọ. 2.280 × 1.080px mkpebi
Igwefoto azụ Nkeji atọ 12 Mpx (Agbanwe oghere f / 1.5 - f / 2.4) + 16 Mpx (f / 2.2) + 12 Mpx (f / 2.4) na OIS Nkeji atọ 12 Mpx (Agbanwe oghere f / 1.5 - f / 2.4) + 16 Mpx (f / 2.2) + 12 Mpx (f / 2.4) na OIS Ugboro abụọ 12 Mpx (Agbanwe oghere f / 1.5 - f / 2.4) + 16 Mpx (f / 2.2)
Igwe n'ihu Ugboro abụọ 10 Mpx (f / 1.9) + 8 Mpx (f / 2.2) 10 Mpx oghere f / 1.9 Ugboro abụọ 12 Mpx (Agbanwe oghere f / 1.5 - f / 2.4) + 16 Mpx (f / 2.2)
Ndị na-eme nhazi Exynos 9820 na QS855 Exynos 9820 na QS855 Exynos 9820 na QS855
Nchekwa 128/512/1 TB 128 / 512 GB 128 / 256 GB
Batrị 4.100 mAh 3.400 mAh 3.100 mAh
Mgbatị microSD ruo 512 GB microSD ruo 512 GB microSD ruo 512 GB
Ihe X x 157.6 74.1 7.8 mm X x 149.9 70.4 7.8 mm X x 142.2 69.9 7.9 mm
Ibu ibu 175 grams 157 grams 150 grams
ndị ọzọ IP68 asambodo - Mkpisiaka agụ n'okpuru ihuenyo - Fast Ikuku Nchaji 2.0 na Reversible Nchaji IP68 asambodo - Mkpisiaka agụ n'okpuru ihuenyo - Fast Ikuku Nchaji 2.0 na Reversible Nchaji IP68 asambodo - Akụkụ mkpisiaka agụ
ahịa 1009 € 909 € 759 €
Maka akụkụ ya, nke Galaxy S10e ga-enye anyị plọg 5,8-anụ ọhịa na igwefoto azụ abụọ, n'adịghị ka igwefoto atọ nke Galaxy S10 na Galaxy S10 + gosipụtara. Ha na-adaba na njedebe nke njirimara ndị ọzọ, belụsọ na a ga-enwe mbipụta dị ọnụ ala karịa nke ga-enwe 6 GB nke Ram na 128 GB nke nchekwa, ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịhọrọ ụdị ahụ na 256 GB nke nchekwa na 8 GB nke Ram ma ọ bụrụ na-ịchọrọ. Batrị ahụ, n'ihi nsogbu nha, na-adakwa 3.100 mAh jiri ya tụnyere 3.400 mAh nke nwanne ya nwoke nke okenye, mana ha dabara na njirimara kacha mkpa. Agbanyeghị, iji mee ka igwe dị ọnụ ala, Samsung na-ewepụta oge a yana onye na-agụ ihe ntanetị aka, na-agagharị iji debe ya n'akụkụ etiti ahụ.
Ihe ngosi banyere ezinụlọ Galaxy S10
Anyị ga-ekwusi ike banyere eziokwu ahụ bụ na Samsung kpebiri ịkụ nzọ na ihuenyo mkpịsị aka na-agụ maka Galaxy S10 na Galaxy S10 Plus, n'agbanyeghị ụdị etiti ọ bụla, ma hapụ naanị "freckle" ebe ihu igwefoto n'ihu. nke Galaxy S10, ihe mmetụta abụọ n'ihe banyere Galaxy S10 Plus. Agbanyeghị, ha dabara na mkpebi ihuenyo ma Galaxy 10 na Galaxy S10 Plus na-enye panel AMOLED di omimi na 3.040 x 1.440 px, nke ahụ bụ ịsị na ụdị nke 6,4 nke anụ ọhịa ya dị ka mbipụta ya nke 6,1.
Samsung nwere oghere oghere nke igwefoto, oge a na-agbakwunye sensọ atọ na igwefoto azụ, 12 Mpx (Agbanwe aperture f / 1.5 - f / 2.4) + 16 Mpx (f / 2.2) + 12 Mpx (f / 2.4) na OIS ka anyị wee ghara ịkọ ihe ọ bụla. Kama, ese foto n'ihu Galaxy S10 + nke nwere ihe mmetụta abụọ nwere 10 Mpx (f / 1.9) + 8 Mpx (f / 2.2), ebe Galaxy S10 nwere naanị 10 Mpx sensor.
Mkpisiaka agụ ike na ihuenyo (n'akụkụ Galaxy S10e)
Ikuku reversible odori na-ana ngwaọrụ ndị ọzọ
Fast Wirless Nchaji 2.0
IP 68 iguzogide mmiri na ájá
Na nhazi ọkwa anyị ga-ahụ dị ka nsụgharị abụọ, otu na Ugwu kwadoro Qualcomm Snapdragon 855, na nke ga-erute na Spain, nke bụ Exynos 9820 arụpụtara site Samsung n'onwe ya. Na ọkwa nchekwa anyị ga - etiti n'etiti 128 GB na 1 TB, ebe na RAM anyị ga - adị n'etiti 6 GB nke S10e na - enye, na 12 GB nke seramiiki nke Samsung Galaxy S10 Plus. Anyị ejiri ụfọdụ akụkọ kachasị mkpa ka anyị gwụ na njedebe dị ka nke a:
Otu na-eme na ọkwa nke nnwere onwe, ebe na Galaxy S10 + anyị ga-eru ọnụọgụgụ nke 4.100 mAh, nke na-esonyere ya Galaxy S10 nke ga - enwe 3.400 mAh na Galaxy S10e naanị 3.100 mAh nke ga - eme ka anyị nwee obi abụọ banyere ngụkọta arụmọrụ, agbanyeghị na a na-eche na Galaxy S10 + Ọ ga - abụ onye mmeri doro anya na nke a, ebe Samsung amachaghị nke ọma.
Samsung Galaxy Buds, ndị agha ọhụrụ maka AirPods
Samsung na-emezigharị ekweisi ekweisi ezi nke Ezi Ikuku ya ọzọ yana atụmatụ dị iche iche na mbipụta ndị gara aga. Anyị lere anya na Samsung Galaxy Buds, obere ekweisi na ga, n'ezie, nwere a ebu ikpe na pampered imewe na Samsung a na-etinyekarị na ngwaọrụ gị.
Ahịa: € 129
Ụbọchị ntọhapụ: Machị 2019
Na ọkwa a haziri, ha kpebiri iwepụta ntakịrị ihe asọmpi ahụ na-enye, na-elekwasị anya n'ịmepụta ngwaọrụ dị iche. Oge a anyị nwere ike ịhọrọ maka mbipụta ọcha na mbipụta ojii ọzọ nke Samsung Galaxy Buds nke ahụ ga-atọ ọtụtụ ndị ọrụ ụtọ.
Samsung Galaxy Ọrụ na Galaxy Fit na Galaxy Fit E
Samsung adịghị Agbaghara ohere eme ya iche nke smart ese, anyị na-ahụ Samsung Galaxy nọ n'ọrụ nke na-eji okpueze mkpanaka na okpokolo, iji jikọta ihe nlele ihuenyo niile nke a ga-enye n'etiti agba ndị ọzọ na ọlaọcha na pink na eriri silicone. Ọ ga-enwe njirimara nke elekere site na ụlọ ọrụ South Korea na ụdị ọmarịcha mma na mfe.
Ahịa: Site na 99 €
Bọchị Mwepụta: March 2019
Abụọ ọhụrụ maka mmebe mgbaaka na ngosipụta akụkụ anọ na eriri silicone, Nkewa dị ka ndị kachasị mma na ahịa maka ọrụ na atụmatụ, dochie anya Galaxy Gear Fit Pro na Galaxy Gear Fit ranges. Obi abụọ adịghị ya na ngwaọrụ abụọ dị mma nke a ga-arụ ọrụ n'ọnụ ahịa dị oke ọnụ dịka o mere na nsụgharị ndị gara aga ma bụrụ nke kpaliri ndị na-ege ntị na ngosi ahụ n'ụzọ dị irè.
Ma nke a bụ ihe niile gbasara #Anyereghị ya aka nke Samsung nke emere taa taa bụ February 20 na nke hapụrụ anyị eriri nke ezigbo ngwaọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Samsung Unpacked: Nke a bụ Galaxy S10 na ngwaọrụ ndị ọzọ ewepụtara
Nke a bụ Galaxy Fold, Samsung nke mpịachi ama
Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 SE na Xiaomi Mi 9 mbipụta doro anya: nkọwa, ọnụahịa na nnweta